Moments Neshamwari 59
Ndezvipi zvinetso zvakakonzera zvose zvinoita uye zvinoratidzika hazvigone kugadziriswa munguva yekukwira inofanira kugadziriswa panguva yokurara kana pakarepo pakumuka?
Kugadzirisa dambudziko, makamuri endangariro dzeuropi anofanirwa kuve asina kuvakwa. Kana paine zvinokanganisa kana zvipinganidzo mukati memakamuri epfungwa, urongwa hwekugadzirisa chero dambudziko riri pasi pekutarisa hunodziviswa kana kumira. Pangangovhiringidza uye zvinokanganisika zvanyangarika, dambudziko ragadziriswa.
Pfungwa nehuropi ndizvo zvinhu mukugadzirisa dambudziko, uye basa ipfungwa. Dambudziko rinogona kuve nehanya nemhedzisiro yemuviri, sekuti ndezvipi zvekushandisa zvinofanirwa kushandiswa uye ndeipi nzira yekuvaka inoteverwa mukuvaka bhiriji kuti ive nehuremu hushoma uye simba rakanyanya; kana dambudziko ringave rechinhu chisinganzwisisike, senge, pfungwa inosiyaniswa sei uye yakabatana papi neruzivo?
Dambudziko remuviri rinogadziriswa nepfungwa; asi mukufunga ukuru, ruvara, uremu, pfungwa dzinodaidzwa kuti dzive mutambo uye kubatsira pfungwa mukugadzirisa dambudziko. Kugadziriswa kwechinetso kana chikamu chechinetso chisiri chemuviri chiitiko chepfungwa mune izvo pfungwa dzisiri hanya uye uko kuita kwemaonero kuchapindira kana kudzivirira pfungwa kubva mukugadzirisa dambudziko. Uropi ndiyo nzvimbo yekusangana yepfungwa nemanzwiro, uye pazvinetso zvine chekuita nemuviri kana zvinosekesa zvinoguma zvaitika pfungwa nemanzwiro zvinoshanda pamwechete pamwechete muuropi. Asi kana iyo pfungwa iri pabasa pane zvinetso zvezvinhu zvisinganzwisisike, pfungwa dzisiri hanya. zvisinei, zvinhu zvepasirose ekunze zvinoratidzwa kuburikidza nemanzwiro achipinda mumakamuri epfungwa dzehuropi uye ipapo zvinokanganisa kana kuvhiringidza pfungwa mune basa rayo. Pangangoita pfungwa kuunza hunyanzvi hwayo kutakura zvakakwana pachinetso chiri kutariswa, kunze kwekuvhiringidzika kana pfungwa dzisina kukanganisirwa dzinobviswa kunze kwemakamuri epfungwa dzeuropi, uye mhinduro yedambudziko ingoonekwa ipapo.
Mumumaawa ekumuka izvo pfungwa dzakazaruka, uye zvisina basa kuona uye nemanzwiro uye zvinongedzo kubva kunze kwenyika zvinomhanya zvisingaite mukati memakamuri epfungwa muuropi uye zvichikanganisa nebasa repfungwa. Kana pfungwa dzikavharwa kune nyika dzekunze, zvavari panguva yekurara, pfungwa dzinodzikiswa pakubata kwayo. Asi ipapo kurara kazhinji kunogura pfungwa kubva kumanzwiro uye kazhinji kunodzivirira pfungwa kudzosa ruzivo rwezvachakaita painenge isiri kubata nemanzwiro. Kana pfungwa dzisirega kuenda kune dambudziko, dambudziko iro rinotakurwa naro kana rikasiya pfungwa mukati mekurara, uye mhinduro yaro inodzoserwa uye inoenderana nemanzwiro ekumuka.
Iyeye muhope anga agadzirisa dambudziko raakange asingakwanise kugadzirisa mudhara yekumuka zvinoreva kuti pfungwa dzake dzave kuita muhope izvo zvaakatadza kuita achiri amuka. Kana akarota mhinduro, chinyorwa chaizove, nezvezvinhu zvinonwisa mvura. Panguva iyoyo, pfungwa, isina kurega dambudziko, yakanga yatakura muchiroto maitiro efunge icho chawakange uchidaro uchamuka; maitiro ekufunga aingotamiswa kubva kunzeve yekumuka kwekunze kuenda kumukati yekurota pfungwa. Kana iyo nyaya isina kunetseka nezvinhu zvinoyemurika, mhinduro haingairote, kunyangwe muhope mhinduro inogona kuuya nekukasira. Nekudaro, hazviwanzoitika kuti mhinduro kumatambudziko arote kana kuuya uchinge wakarara.
Mhinduro kumatambudziko dzingaite senge dzinouya panguva yekurara, asi mhinduro dzinowanzo kuuya panguva dzepfungwa dzirikuita zvakare kubatana neyekupepuka pfungwa, kana pakarepo mushure mekumuka. Mhinduro kumatambudziko ehunhu husinga bvumike hahugone kurotwa, nekuti pfungwa dzinoshandiswa muchiroto uye pfungwa dzinogona kukanganisa kana kudzivirira kufunga kwekufungidzira. Kana pfungwa pakurara uye kusarota dzikagadzirisa dambudziko, uye mhinduro inozivikanwa kana murume amuka, ipapo pfungwa dzinoratidzika kumuka pakarepo kana mhinduro yasvika nayo.
Pfungwa hadziko pakuzorora muhope, kunyangwe pasina kurota kana kurangaridza chiitiko chepfungwa. Asi zviitiko zvepfungwa muhope, uye kana usiri kurota, hazviwanzo zivikanwa kuti zvizivikanwe munzvimbo yekumuka, nekuti hapana bhiriji rakavakwa pakati penyika dzepfungwa nenyika dzekumuka kana pfungwa dzekumuka; zvakadaro mumwe anogona kuwana mhedzisiro yezviitiko izvi nenzira yekukurudzira kuita mune yekumuka mamiriro. Bhiriji renguva pfupi pakati penyika dzepfungwa uye dzinoyemura dzinoumbwa neiye anorara akasimba dambudziko iro pfungwa yake yakanangidzirwa paakamuka. Kana akashandisa pfungwa dzake zvakakwana mukuyedza kwake kutarisa iko kugadzirisa dambudziko iri akamuka, kuedza kwake kucharamba kuri kuhope, uye kurara kuchadzikwa uye iye achamuka uye ave kuziva mhinduro, kana anga asvika pairi panguva yekurara.